Eoropa Afovoany & Atsinanana · Marsa, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Afovoany & Atsinanana · Marsa, 2010
Tantara mikasika ny Eoropa Afovoany & Atsinanana tamin'ny Marsa, 2010
Makedonia 21 Marsa 2010
Samy nanome ny valinteniny avy na ny mpamaham-bolongana na ny mpampiasa fitaovan-tserasera vaovao tamin'ny fanontaniana manao hoe “Ahoana ny nanovan'ny aterineto ny fiainanao?”, ao amin'ny lahatsoratra [MKD] iray amin'ny hita ao amin'ny vohikala miteny Masedoniana an'i BBC. Darko Buldioski ao amin'nyKomunikacii.net moa nampihatra ny fanaon'ny Slavy mamantatra ny valin'ny fanontaniana mifamaly...
Pologne: Ady amin'ny homamiadana amin'ny aterineto
Polonina 06 Marsa 2010
Zazavavy kely miramirana 5 taona i Lenka ary i Paula kosa dia mpianatra momba ny haiendrika anatiny ("design interieur") manatona ny faha-20 taonany. Tsy mieritreritra ianao hoe mety hanana zavatra iraisana izy roa ireo nefa dia misy izany. Samy manana homamiadana izy ireo ary samy manana blaogy hiresahan'izy ireo ny fiadiany amin'ity aretina ity
Bolgaria 02 Marsa 2010
Rosiana maro vonona ny handoa vola ny votoaty an-tserasera
Rosia 02 Marsa 2010
Fanadihadiana vaovao nataon'i Nielsen no nampiseho fa mihoatra ny antsasaky ny Rosiana no vonona ny handoa vola amina votoaty an-tserasera. Fa ny mahatalanjona amin'ny valin'izany fanadihadiana izany sy ny famakafakana azo sintoina aminy dia mivoaka ao amin'ny Slon.ru (ampiasao ny mili-pandikan-teny).